कोरोनाबाट चितवनवासीले उच्च सर्तकता अपनाउन जरुरी ! – Saurahaonline.com
कोरोनाबाट चितवनवासीले उच्च सर्तकता अपनाउन जरुरी !
चितवन : चितवनमा समुदाय स्तरमा कोरोना गएको अनुमान गरिएको छ । बुधवार जिल्लामा ट्राभल हिस्ट्रि नभएका ५ जनामा कोरोना देखिएपछि समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भएको आशंका गरिएको हो ।
‘बुधबार भरतपुर महानगरपालिकाका ३, राप्ती र खैरहनी नगरपालिकामा कोरोना देखिएका व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्रि छैन । उनिहरु विदेशबाट आएका व्यक्ति पनि होईन् । उनिहरुको घरपरिवारमा पनि विदेशबाट कोही आएका छैनन् ।’ स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक तिवारीले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने समुदायमा गएको आशंका गर्न सकिन्छ ।’ तर, समुदाय स्तरमा गएको पुष्टि हुनका लागि अहिले देखिएका संक्रमितसंग प्रत्यक्ष संलग्न भएका व्यक्तिको कोरोना पिसिआर परिक्षण गरेपछि थाहा हुने उनले बताए ।
चितवनमा बुधवार पुष्टिभएका १५ जना कोरोना संक्रमित मध्ये ५ जना क्वारेन्टाईन बाहिरका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ७का ६१ वर्षीय पुरुष, भरतपुर–११ की ४५ वर्षीया महिला, र भरतपुर २२का एक, राप्ती नगरपालिकामा एक र खैरहनी नगरपालिकामा कोरोना देखिएका व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्रि नभएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए । राप्ती र खैरहनीका दुईजना बिरामी भएर उपचारका लागि नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा थिए । अहिले त्यहाँबाट उनिहरुलाई भरतपुर अस्पतालमा रेफर गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमा कोरोना पुष्टिभएमा पहिलो चरण मान्ने गरेको छ भने, विदेशबाट आएका आफन्त वा उनिहरुको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरुमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएमा दोस्रो चरण मान्ने गरेको छ । त्यस्तै कहिँ कत्तै नगएका र विदेशबाट आएकाहरुको सम्पर्कमा पनि नरहेकाहरुलाई कोभिड–१९ देखिएमा तेस्रो चरण मान्ने गरेको छ । यो चरणलाई समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको पनि भन्ने गरिन्छ । चौथो चरणलाई महामारीको रुपमा लिईएको छ । चितवनमा जेठ २६ गते पुष्टिभएका ३ जनाको व्यक्तिको ट्राभल हिस्ट्री थिएन् । त्यतिखेर उनिहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा कोरोना पुष्टि नभएकाले समुदाय स्तरमा गएको भन्ने आधार नरहेको तिवारीले बताए ।
पछिल्लो समयमा विदेशबाट स्वदेश फर्किनेको संख्या बढेकाले संक्रमित अझै थपिने उनको भनाई छ । क्वारेन्टाईन बाहिरका व्यक्तिमा कोरोना देखिन थालेपनि लकडाउन झन खुकुलो हुँदा कोरोना संक्रमित बढ्ने आशंका गरिएको छ । यत्ता चितवनमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं।२२ र वडा नं।११ का एक÷एक जनामा बुधबार कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमण पुष्टि भएपछि दुवै वडा कार्यालयले सतर्कता अपनाएको छ । दुवै वडा कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै वडाबासीहरुलाई अतिआवश्यक काम बाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका छन् ।
भरतपुर–२२ का वडाध्यक्ष विष्णुराज महतोद्धारा जारी विज्ञप्तीमा कोरोना भाइरस पटिहानीमा समुदायस्तरमै फैलिएकोले सतर्क रहन वडाबासीहरुलाई आग्रह गरिएको छ । वडाबासीहरुलाई सामाजिक, भौतिक दुरी कायम गरी कोरोनाबाट बचौं र बचाऊ भन्दै सबै अतिआवश्यक काम बाहेक घर भन्दा बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ ।भरतपुर–११ का वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तीमा पनि अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर नजान सबै वडाबासीमा आग्रह गरिएको छ । यस वडाले पूर्व गाइखर्क चोक, पश्चिम अमन चोक, उत्तर समीको चौतारा नहर, दक्षिण प्रगति चोक चार किल्ला क्षेत्रभित्र सैलुन, ब्यूटीपार्लर, होटल र सहकारी संस्था नखोल्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ ।
जिल्लामा पहिलो पटक बैशाख ५ गते राप्ती नगरपालिकाका दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो । अहिले सम्म चितवनका ७६ जनाका कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका बाहेक जिल्लाका सवै तहमा कोरोना पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार, भरतपुर महागरपालिकामा ३४, माडी नगरपालिकामा २९, राप्ती, खैरहनी र कालिकामा ४÷४ र रत्ननगरपालिकामा १ जनामा कोरोना देखिएको छ । त्यसमध्ये २२ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । फोक्सोको क्यान्सर लागेका ७४ बर्षिय बृद्धले पनि कोरोना जितेका छन् । एक जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
यस्तै चितवनमा बुधवार साँझ कोरोना पुष्टि भएकी महिला गर्भवती महिला रहेको बुझिएको छ । कालिका नगरपालिका ७की २७ बर्षिय गर्भवति महिला कताबाट आएकी थिईन् । उनि कतारबाट आएपछि कालिका नगरपालिकाले तयार गरेको क्वारेन्टाईनमा बसेको कालिका नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । उनको उपचार भरतपुर अस्पतालमा हुने बताईको छ । अहिले उनको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दिपक तिवारीले जानकारी दिए । बुधवार साँझ कालिका नगरपालिकामा ३६ बर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । उनि दुवईबाट नेपाल आएका थिए ।